Kooxaha Juventus iyo PSG oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig ka tirsan Manchester United – Gool FM
(Manchester) 05 Agoosto 2021. Sida wararku ay sheegayaan Kooxaha Juventus iyo PSG ayaa ku dagaallamaya saxiixa xiddig ka tirsan naadiga reer England ee Manchester United.
Kooxaha Juventus iyo PSG ayaa ku tartamaya saxiixa Paul Pogba sida uu warinayo Warsidaha Calcio Mercato, waxaana ciyaaryahanka Man United uu u muuqdaa mid ku laabanaya Magaalada Turin.
Warbixinta lagu daabacay Calcio Mercato ayaa intaa ku daraysa in Juventus ay diyaar u tahay inay Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain kaga adkaato saxiixa Paul Pogba.
Bianconeri ayaa dooneysa inay dib ula soo saxiixato 28-sano jirkaan xilli la hadal hayo in Manchester United ay diyaar u tahay inay u ogaato inuu kooxda kaga tago lacag dhan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 43 milyan oo gini ama 59 milyan oo dollar.
Pogba oo kaliya 12 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa Man Utd ayaa Kooxda reer Talyaani ee Juve u soo ciyaaray intii u dhaxeysay 2012 iyo 2016, laakiin PSG ayaa sidoo kale isku diyaarineysa inay dalbato adeegga xiddigan khadka dhexe ee reer France.